Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Holland America Line alọghachila azụmaahịa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Ịtụ egwu • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Holland America Line's Nieuw Statendam hapụrụ Fort Lauderdale, Florida, taa na njem ụgbọ mmiri mbụ ya kemgbe nkwụsịtụ ụlọ ọrụ n'afọ gara aga. Ụgbọ mmiri ahụ bụ ụgbọ mmiri Holland America Line nke ise iji banyeghachi ọrụ, na-esonye na Rotterdam, Koningsdam, Eurodam na Nieuw Amsterdam.
Iji mee emume ahụ, Holland America Line mere emume ịcha rịbọn na ọdụ ụgbọ mmiri iji mepee ụgbọ mmiri, ndị otu egwuregwu keleekwa ndị ọbịa site n'ife ọkọlọtọ ka ha na-abanye n'ụgbọ mmiri ahụ. Ndepụta Statendam were ụgbọ mmiri ga njem ụbọchị asaa n'ebe ọdịda anyanwụ Caribbean nke ga-aga Nassau, Bahamas; Ocho Rios na Port Royal, Jamaica; na Half Moon Cay, agwaetiti nkeonwe Holland America Line na Bahamas.
Ndepụta Statendam ga-anọ site na Nọvemba ruo Eprel na Caribbean na njem ụgbọ mmiri sitere na ụbọchị asaa ruo ụbọchị iri na otu, njem niile site na Port Lauderdale's Port Everglades. Ndị ọbịa na-achọ ebe mgbapụ ogologo oge nwere ike ịbanye na njem ndị na-anakọta ihe - njem njem azụ na azụ jikọtara ọnụ nke na-enye nyocha dị omimi na-ekpuchi ihe karịrị otu akụkụ nke mpaghara ahụ.
Ụgbọ mmiri Caribbean ọ bụla na-agụnye oku na Half Moon Cay, àgwàetiti Bahamian nke na-emeri nke Holland America Line. Ebe nsọ a mara mma aghọọla ebe egwuregwu ebe okpomọkụ maka ndị ọbịa na-eme njem nlegharị anya ma na-egosipụta ụsọ osimiri na-acha ọcha; ụlọ ụlọ okpukpu abụọ na cabanas nkeonwe; ebe iri nri dị ụtọ dị ka Lobster Shack; ogige mmiri ụmụaka; na njem nlegharị anya dị iche iche na-atọ ụtọ maka ndị hụrụ okike n'anya, ndị njem na-akpali akpali na ndị na-eme nchọpụta.
Line Holland America na-ebubata site na Port Everglades kemgbe 1990s. Na-arụ ọrụ, njem ụgbọ mmiri ọ bụla na-enye $364,000 ozugbo na akụ na ụba mpaghara na ịnye (mmanụ ọkụ, nri, ifuru, nzigharị piano, ihe enyemaka, wdg), ụtụ ọdụ ụgbọ mmiri na mmefu. Holland America Line na-arụ ọrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-ere ahịa South Florida 100 na-enye ụlọ ọrụ na ụgbọ mmiri ya ngwa ahịa na ọrụ.
N'ime afọ niile, Holland America Line ejirila ihe karịrị ụlọ ọrụ 30 na-anaghị akwụ ụgwọ na South Florida na-arụsi ọrụ ike site na inye, nri ehihie ụgbọ mmiri, na onyinye njem ụgbọ mmiri, gụnyere Seafarers' House, Henderson Behavioral Health, Coast Guard Women's Leadership Initiative, Symphony of the Americas, Opera Society na ndị ọzọ.